‘जिउँदो लाश’ बनेको ३ वर्षपछि निशाको उद्धार, आज देखि नर्भिक अस्पतालमा उपचार सुरु ! – Dainik Sangalo
‘जिउँदो लाश’ बनेको ३ वर्षपछि निशाको उद्धार, आज देखि नर्भिक अस्पतालमा उपचार सुरु !
काठमाडौं–भारतको देहरादुनमा सडक दुर्घटनामा परेर गम्भीर घाइते भएकी मोडल निशा घिमिरेको थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचार सुरु भएको छ ।अढाई वर्ष अघि मोडलिङ पढ्न देहरादुन पुगेकी निशाको त्यहाँ सडक दुर्घटनामा परी ‘ब्रेन इञ्जुरी’ भएको थियो ।
निशाका बुवा राजु घिमिरेका अनुसार बिहीबार दिउँसो निशालाई नर्भिकमा भर्ना गरिएको छ । ‘देहरादुनमा दुर्घटना भएपछि त्यहाँ प्रारम्भिक उपचार गरेर काठमाडौंको ट्रमा सेन्टरमा ल्याई बाँकी उपचार गर्यो । त्यसपछि छोरीलाई घरमा लगेर रेखदेख गरिरहेका थियौं’, राजुले भने ।
राजुले हालसम्म निशाको उपचारमा करिब ३० लाख रुपैंयाँ खर्च भइसकेको बताए । ‘सुरुमा छोरीको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग पनि प्राप्त भइरहेको थियो । पछि हामी आफैंले पनि उपचार गर्यौ’, उनले भने ।घरका चार सन्तानमध्ये निशा कान्छी हुन् । बाल्यकालदेखि नै मोडल बन्ने चाहना राखेकी उनले तीन दर्जन म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेकी छन् ।
काठमाडौंमा ल्याएर ट्रमा सेन्टरमा राखेर ३ महिनासम्म उपचार गरिएको थियो । तर उनको अवस्थामा सुधार हुन सकेन । त्यसपछि चिकित्सककै सल्लाहअनुसार उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रका थेरापी सेन्टरमा कलाकार घिमिरेको लगातार थेरापी गरिएको थियो ।
नियमित थेरापी गर्न समेत आर्थिक अभाव भएको र त्यही बीचमा कोरोनाको संक्रमणको महामारी बढेपछि उनी घरमै थन्किएकी थिइन् ।
‘आमाबुवा दैनिक ज्यालादारी गर्न जानुपर्ने भएकाले उनको पर्याप्त हेरविचार समेत हुन सकेन,’ उनलाई नजिकबाट चिन्ने र उद्धारका लागि समन्वयकर्ताको भूमिका खेलेका नवजीवन परोपकार समाजका सञ्चालक दुर्गानाथ दाहालले भने, ‘कलाकार घिमिरेको दर्दनाक अवस्थाको विषयमा मैले फेसबूकमा पोस्ट गरेको थिएँ, त्यसमा नर्भिककी प्रबन्ध निर्देशक चौधरीले चासो राख्नुभयो र उहाँले आफ्नो समन्वयमा उपचार प्रबन्ध मिलाउने भ’नेर उ’द्धार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुभए’को हो ।’
दाहालका अनुसार दुर्घटनाअघि ६० किलोभन्दा बढी तौल रहेको कलाकार घिमिरे आहार, हेरविचार र उचित उपचारको अभावमा सुकेर २० केजीमा सीमित भएकी छन् ।
‘कोरोनाकालमा निशा बहिनीलाई केही सहयोग गर्न म उहाँको ललितपुरस्थित बतासेमा रहेको घरमा पुगेको थिएँ, अवस्था दर्दनाक देखेपछि मैले सहयोगको अपिलसहित पोस्ट गरें,’ दाहालले भने, ‘मनकी धनी मेघा चौधरीज्यूले म उपचार गर्छु भनेर उद्धार गर्नुभयो । म धेरै खुशी छु ।’ यो अवधिमा निशाको अवस्थाबारे समाचारहरू समेत प्रकाशन भएका थिए । तर उनलाई उद्धार गर्न, उचित उपचार व्यवस्था मिलाउन कसैले पनि सहयोग गरेनन् ।
बिहीवार बिहान कलाकार घिमिरेको उद्धार गरिएको थियो । उनलाई लिन नर्भिक अस्पतालको एम्बुलेन्स गएको थियो । हाल उनको नर्भिक अस्पतालमा राखेर उपचार थालिएको छ ।
प्रारम्भिक जाँचको क्रममा उनमा नशाको समस्या देखिएको छ । शरीरका महत्त्वपूर्ण अंगहरू जस्तैः मुटु, मिर्गाैला, कलेजो, फोक्सो लगायतमा ठूलो समस्या देखिएको छैन ।
नर्भिकका चिकित्सकले निशाको अवस्थामा सुधार हुने अपेक्षा गरेका छन् । ‘पहिलाजस्तै मोडलिङ नै गर्ने गरी त ठीक नहोला,’ चिकित्सकलाई उदृत गर्दै दुर्गा दाहालले भने, ‘तर कम्तीमा आफैं हिँडडुल गर्नसक्ने, आफैं खानसक्ने र केही बोल्न सक्नेसम्म पनि भयो भने पनि धेरै हुन्छ ।’
हाल निशा बोल्न सक्दिनन् । अरुले खुवाइदिनुपर्छ । कसैले केही कुरा गर्‍यो भने सुन्न सक्छिन् र आँसु बगाउने गर्छिन् । जवाफ दिन वा अरुलाई प्रतिक्रिया जनाउने अवस्थामा छैनन् । हातखुट्टा नै कुँजिएर ओछ्यान परेको ३ वर्षपछि चौधरीको पहलमा उनको उद्धार भएकोमा छिमेकी र उनका अभिभावक समेत खुशी छन् ।
Prevसर्वोच्चले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि पूर्व युवराज पारसकी छोरीको यस्तो ट्वीट
Nextनागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश [पूर्णपाठ]
प्रहरी सहायक निरीक्षक रमेश बुढाथोकीको स्वाब सङ्कलन गरिँदै